1996 – Year – Alpha Premium
Spy Hard (1996) (App only) ##unicode စိတျညဈစရာတှခေဏလောကျမသှေ့ားစမေယျ့ ဟာသကားဟောငျးလေးတဈကားတငျဆကျပေးပါ့မယျ။ ကမ်ဘာကွီးကိုသိမျးပိုကျမယျ့အကွံအစညျရှိနတေဲ့ လကျနကျအရောငျးအဝယျသမားရနျကာကိုသတျဖို့ ဒဈစတီးဆိုတဲ့အေးဂငျြ့ကို တာဝနျပေးခွငျးခံရပါတယျ။ ဒဈစတီးက ရနျကာစီးသှားတဲ့ရဟတျယာဉျကို ဖောကျခှဲလိုကျနိုငျပမေဲ့ သူခဈြရတဲ့ အေးဂငျြ့ဗဈတိုးရီးယားကိုလညျး ဆုံးရှုံးလိုကျရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ၁၅ နှဈကွာပွီးတဲ့နောကျမှာ ရနျကာကမသဘေဲပွနျပျေါလာပွီး ဗဈတိုးရီးယားရဲ့သမီဖွဈသူကိုပါ ဖမျးမိထားကွောငျး သတငျးစကားပေးပို့လာပါတယျ။ တာဝနျကနေ အနားယူထားတဲ့ဒဈစတီးလညျး ရနျသူဟောငျးကွီးပွနျပျေါလာတော့ မနနေိုငျဘဲ ရနျကာရဲ့ဒုံးခညျြလှတျတငျမယျ့အစီအစဉျကို တားဆီးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။ ဒဈစတီးတဈယောကျ စဈဆငျရေးမှာ အလှဲလှဲအခြျောခြျောတှနေဲ့ ရနျကာကိုတားဆီးသှားနိုငျမှာလား၊ ဗဈတိုးရီးယားတဈယောကျကိုပဲ မမနေို့ငျဘဲခဈြခဲ့တဲ့ သူ့အခဈြတှကေရော ပွနျလညျလနျးဆနျးလာနိုငျဦးမလားဆိုတာကို ပြျောရှငျရယျမောရငျးကွညျ့ရှု့ကွရမှာပါ။ ##zawgyi စိတ်ညစ်စရာတွေခဏလောက်မေ့သွားစေမယ့် ဟာသကားဟောင်းလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်မယ့်အကြံအစည်ရှိနေတဲ့ လက်နက်အရောင်းအဝယ်သမားရန်ကာကိုသတ်ဖို့ ဒစ်စတီးဆိုတဲ့အေးဂျင့်ကို တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါတယ်။ ဒစ်စတီးက ရန်ကာစီးသွားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကို ဖောက်ခွဲလိုက်နိုင်ပေမဲ့ သူချစ်ရတဲ့ အေးဂျင့်ဗစ်တိုးရီးယားကိုလည်း ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ရန်ကာကမသေဘဲပြန်ပေါ်လာပြီး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့သမီဖြစ်သူကိုပါ ဖမ်းမိထားကြောင်း သတင်းစကားပေးပို့လာပါတယ်။ တာဝန်ကနေ အနားယူထားတဲ့ဒစ်စတီးလည်း ရန်သူဟောင်းကြီးပြန်ပေါ်လာတော့ မနေနိုင်ဘဲ ရန်ကာရဲ့ဒုံးချည်လွှတ်တင်မယ့်အစီအစဉ်ကို တားဆီးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒစ်စတီးတစ်ယောက် စစ်ဆင်ရေးမှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေနဲ့ ရန်ကာကိုတားဆီးသွားနိုင်မှာလား၊ ဗစ်တိုးရီးယားတစ်ယောက်ကိုပဲ မမေ့နိုင်ဘဲချစ်ခဲ့တဲ့ သူ့အချစ်တွေကရော ပြန်လည်လန်းဆန်းလာနိုင်ဦးမလားဆိုတာကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောရင်းကြည့်ရှု့ကြရမှာပါ။ Review – Yue Liang File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p ...
IMDB: 5.4/10 36,556 votes
The Stunt Woman (1996) ##unicode ဒီဇာတျကားထဲမှာ ထိုငျဝမျက နာမညျကွီး မငျးသမီး Michelle Yeoh မှ ပါဝငျသရုပျဆောငျပေးထားပါတယျ သူမက တရုတျပွညျမကွီးမှာ ကှနျဖူးပညာကို လကေ့ငျြ့သငျယူခဲ့ပွီး ဟောငျကောငျမှာ ရုပျရှငျမငျးသမီးတှရေဲ့ ကိုယျပှားနရောမှာ သရုပျလိုကျဆောငျပေးတာပါ သူမရဲ့သိုငျးကှကျတှကေို ဒါရိုကျတာကနေ သဘောကသြှားပွီး နောကျနတှေ့ေ ဆကျလာဖို့ မှာလိုကျပါတယျ တဈနကေ့တြော့ ရိုကျကူးရေးသမားတှအေားလုံး ခြုံခိုတိုကျခိုကျခံရပါတယျ ရိုကျကှငျးမှာ လူလိုနတောနဲ့ သူမဟာ အခြိနျပွညျ့ စတနျ့မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ စတနျ့သမားတှဟော ဘယျလိုမြိုး ကိုယျကြိုးစှနျ့ပွီး ဇာတျလမျးကို စိတျလှုပျရှားဖှယျဖွဈအောငျ သိုငျးကှကျအလနျးစားတှနေဲ့ ရုပျရှငျကို အသကျဝငျအောငျ လုပျပွကွလဲဆိုတာ ရညျရှယျပွီး ရိုကျကူးပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ထိုင်ဝမ်က နာမည်ကြီး မင်းသမီး Michelle Yeoh မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ် သူမက တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ ကွန်ဖူးပညာကို လေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်မှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ပွားနေရာမှာ သရုပ်လိုက်ဆောင်ပေးတာပါ သူမရဲ့သိုင်းကွက်တွေကို ဒါရိုက်တာကနေ သဘောကျသွားပြီး နောက်နေ့တွေ ဆက်လာဖို့ မှာလိုက်ပါတယ် တစ်နေ့ကျတော့ ရိုက်ကူးရေးသမားတွေအားလုံး ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ် ရိုက်ကွင်းမှာ လူလိုနေတာနဲ့ သူမဟာ အချိန်ပြည့် ...
IMDB: 6.2/10 226 votes
Aladdin and the King of Thieves (1996) ##unicode ဇာတျလမျးအကဉျြး လူဆိုးကွီးဂြာဖာသဆေုံးပွီးနောကျမှာတော့ အာလာဒငျနဲ့ ဂကျြစမငျတို့ရဲ့အခဈြခရီးလမျးဟာ ဖွောငျ့ဖွူးသှားပွီလို့ထငျခဲ့ပမယျ့ မထငျမှတျထားတဲ့ပွဿနာရှိခဲ့ပါတယျ အာလာဒငျဟာ သူ့ရဲ့မင်ျဂလာဆောငျနမှေ့ာ မိဘတှမေရှိတဲ့အတှကျ အားငယျနခေဲ့ပါတယျ မင်ျဂလာဆောငျ ကငျြးပစဉျအတှငျးမှာ သူခိုးအယောကျ ၄၀လို့နာမညျကွီးနတေဲ့ ဓားပွအုပျစုက ဝငျတိုကျခိုကျပါတယျ သူတို့ကိုဦးဆောငျသူကတော့ သူခိုးဘုရငျလို့ အမညျရတဲ့သူပါ သူကထူးဆနျးတဲ့ ရှဖွေ့ဈဟောပစ်စညျးကိုခိုးဖို့ရောကျလာတာပါ ဒါပမေယျ့အာလာဒငျကွောငျ့မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး အာလာဒငျကလညျးထိုပစ်စညျးကိုသူ့အဖအေကွောငျး မေးတဲ့အခါမှာ သူ့အဖကေသူခိုးကွီး ၄၀ ဆီမှာပိတျမိနကွေောငျး ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ အာလာဒငျအဖကေဘယျသူလဲသူခိုးတှနေဲ့ဘယျလိုပတျသကျနတောလဲဆိုတာတှကေို အဖွရှောတဲ့အကွောငျးဖွဈပါတယျ စိတျဝငျစားဖို့အရမျးကောငျးတဲ့အပိုငျးလညျးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း လူဆိုးကြီးဂျာဖာသေဆုံးပြီးနောက်မှာတော့ အာလာဒင်နဲ့ ဂျက်စမင်တို့ရဲ့အချစ်ခရီးလမ်းဟာ ဖြောင့်ဖြူးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ပမယ့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ် အာလာဒင်ဟာ သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာ မိဘတွေမရှိတဲ့အတွက် အားငယ်နေခဲ့ပါတယ် မင်္ဂလာဆောင် ကျင်းပစဉ်အတွင်းမှာ သူခိုးအယောက် ၄၀လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဓားပြအုပ်စုက ဝင်တိုက်ခိုက်ပါတယ် သူတို့ကိုဦးဆောင်သူကတော့ သူခိုးဘုရင်လို့ အမည်ရတဲ့သူပါ သူကထူးဆန်းတဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောပစ္စည်းကိုခိုးဖို့ရောက်လာတာပါ ဒါပေမယ့်အာလာဒင်ကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး အာလာဒင်ကလည်းထိုပစ္စည်းကိုသူ့အဖေအကြောင်း မေးတဲ့အခါမှာ သူ့အဖေကသူခိုးကြီး ၄၀ ဆီမှာပိတ်မိနေကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် အာလာဒင်အဖေကဘယ်သူလဲသူခိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေတာလဲဆိုတာတွေကို အဖြေရှာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 970MB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre : Animation, Adventure, Comedy Subtitle : Myanmar ...
IMDB: 6.4/10 32,653 votes
IMDB: 4.7/10 2,039 votes
IMDB: 6.1/10 148,526 votes
That’s Cunning! Shijo Saidai no Sakusen? Zawgyi “မင်းတို့ကို မမိဘူးဆိုရင် စာခိုးချတယ် လို့ မခေါ်ဘူးလေ စာခိုးချတယ် ဆိုတာ အလှတရားပဲ စာခိုးချတယ် ဆိုတာ တရုတ်ပြည့်ရဲ့ခါခဲ‌ခေတ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ က စခဲ့တာ သမိုင်းမှာ အသုံးချခဲ့တဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် ဒါက အနုပညာပဲ” ဒါက ဇာတ်လမ်းထဲက ဒိုင်ယာလော့တစ်ခုပါ။ ကျောင်းသားဘဝမှာ စာမခိုးချဖူးတဲ့သူ ရှိပါသလား????? မရှိဘူးဆိုရင် ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ စာခိုးချနည်းပေါင်းစုံကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ခိုးချဖူးတယ်ဆိုရင်‌တော့ ခိုးချနည်းအသစ်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ တချို့ဇာတ်ကွက်တွေက လွဲလို့ မဟောင်းတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လူကောင်းလုပ်ရတာထက် လူဆိုးလုပ်ရတာက လောကကြီးမှာ ပိုပြီး နေသာထိုင်သာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်က ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်လည်တမ်းတကြည့်ရအောင်ပါဗျာ။ Unicode “မငျးတို့ကို မမိဘူးဆိုရငျ စာခိုးခတြယျ လို့ မချေါဘူးလေ စာခိုးခတြယျ ဆိုတာ အလှတရားပဲ စာခိုးခတြယျ ဆိုတာ တရုတျပွညျ့ရဲ့ခါခဲ‌ခတျေမှာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁၄၀၀ က စခဲ့တာ သမိုငျးမှာ အသုံးခခြဲ့တဲ့ ...
IMDB: 6.5/10 89,174 votes
IMDB: 5.5/10 2,499 votes
IMDB: 7.0/10 3,326 votes
IMDB: 7.3/10 7,801 votes